Scholarships - NLP - Master & PhD
Master na PhD na Natural Language nhazi
6 afọ nke nnyocha na-enweghị na-eche echiche nke ego
Ọ bụghị a ego • Ọ dịghị ọzọ ibu •-ekwe nkwa site Government
Olee na-amụ nna ukwu ma ọ bụ PhD ná mba ọzọ? Olee na-amụ na Americas? Ebe na-amụ eke asụsụ nhazi? Olee na-ebipụta na nkà mmụta sayensị isiokwu n'elu magazin? Ebe nweta ezi mfọn Master ma ọ bụ PhD? -Achọ n'ụzọ zuru ezu kwụrụ ụgwọ Master ma ọ bụ PhD ọnọdụ?
(Nke a na ederede e na-akpaghị aka sụgharịa gị mma si English mbụ. Anyị na-arịọ mgbaghara maka ihe ọ bụla na njehie.)
The Natural Language nhazi Laboratory nke Center maka Computing Research (CIC) nke National Polytechnic Institute (IPN), Mexico City, Mexico, na-enye a ole na ole nke scholarships ka mba ụmụ akwụkwọ maka ịkpata Master ma ọ bụ PhD n'ókè na Computer Science na a tesis na n'ógbè Natural Language nhazi. Mgbe ịkpata a Master ogo, ụmụ akwụkwọ na-ume itinye maka PhD larịị, na (ma ọ bụrụ na ha gafee; ha na-eme) na mfọn na-akp ya.
Isiokwu gụnyere, mana na-ejedebeghị na, n'akụkụ nile nke Natural Language nhazi (NLP), Computational Linguistics (cl), Human Language Technologies (HLT), na yiri ebe. Lee anyị akwụkwọ na gbachiteere adian maka ihe atụ nke anyị nnyocha ọdịmma.
Ego nke mfọn: Master nke 600 USD, PhD: 800 USD kwa ọnwa approx (gụnyere ezumike; ebe a nwere ike na-emelite Ama Spanish). Nke a bụ karịa ezuru nkịtị ndụ na ịgbaziri a ụlọ na Mexico City. The mfọn bụ a ego: ị na-agaghị na-atụ anya ka ọ laghachi ya; dịghị ọrụ (dị ka izi aka) a chọrọ. A bụ m ngosi banyere anyị scholarships kwadebere maka India (kasị eleghị anya etinyere gị asị, oke).
Duration: Master si: ruo 2 afọ (na-emekarị extendable ka 2.5 afọ), PhD: ruo 4 afọ.
Ụdị omume: Research. Ma omume na-gbakwasara na nnyocha sayensị na akwụkwọ kama rụọ gị mmemme nkà.
Employment: Ọtụtụ n'ime anyị na PhD na-agụsị akwụkwọ na-arụrụ ọrụ na academia na governmentally kwụrụ ụgwọ nnyocha, ezie na e nwere ihe ịga nke ọma akụkọ na-arụ ọrụ na n'elu ụlọ ọrụ. Anyị MSc ụmụ akwụkwọ a na-anọgide na-na PhD larịị; ndị na kpebiri na ha agaghị anọgide na, na-arụrụ ọrụ na academia ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Admission: ebe a bụ nkọwa nke anyị mbanye usoro, ma, biko na-agụ na; ị ga-ahụ otu njikọ na ala nke na peeji a.
Gịnị mere ọmụmụ CIC?
Asambodo: Ma anyị PhD na nna ukwu mmemme bụ otu n'ime nnọọ ole na ole omume na Mexico gbaara site na Government dị ka mba-larịị mma mmemme.
J.Randall: CIC bụ J.Randall research center, na-eduga mba nnyocha center na Computer Science.
Future: Fọrọ nke nta niile anyị PhD na-agụsị akwụkwọ na-nkụzi ma ọ bụ na-eme nnyocha na mahadum dị mma, ụfọdụ na post-doctorate ogo. Ọtụtụ n'ime ha na-egosipụta maka ha arụpụtaghị ihe dị mkpa asambodo nke National nchọpụta nke Mexico. Ọtụtụ n'ime anyị ukwu si na-agụsị akwụkwọ anọgide na-amụ maka PhD ogo, ụfọdụ na anyị na ụfọdụ na Europe, eg, na UK ma ọ bụ France.
Quality: Ọtụtụ n'ime anyị na ụmụ akwụkwọ natara mkpa enọ; atọ n'ime ha natara a Gold Nrite n'aka nke President nke mba ahụ na onye ọbụna natara Microsoft Research Latin America Fellowship.
Ndi ana-akpo: Anyị ifịk ifịk imekota na magburu onwe nnyocha dị iche iche na Europe, USA, Asia, Africa, na Latin America.
Ohere: Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ anyị agaala internships na Microsoft, Iha, Yahoo!, na Xerox. Anyị na-enye ego maka internships na kacha mma mba mahadum.
Emeri: anyị ụmụ akwụkwọ merie mba asọmpi nke usoro na algọridim.
Etozu: anyị professors nwere magburu onwe n'akwụkwọ ndekọ, bụ academicians nke Mexico Academy nke Science na National Researchers of Mexico nke kacha mma na-etoju 3 (kasị elu) ma ọ bụ 2 (nke abụọ kasị elu), na na-natara mkpa enọ.
Ego: anyị na ụmụ akwụkwọ na-nyere ego maka ịga nzukọ (na mba n'ókèala na ụfọdụ mba ndị ọzọ), nakwa dị ka a nụrụ na top magazin na-achọ ugwo.
Ihe: anyị na ụmụ akwụkwọ isonye na nzukọ nke nnukwu mba uwa okwu ndị dị otú ahụ dị ka CICLing ma ọ bụ MICAI na enyere ha advisors na ndị ọzọ dị mkpa, dị ka edezi prestigious magazin: CyS, IJCLA, POLIBITS, nke professors anyị Laboratory bụ Editors-in-Chief.
Ambience: Anyị nwere mba otu nke ọkachamara na ụmụ akwụkwọ. Anyị PhD omume nwere professors si na anyị Laboratory nwere ma ọ bụ nwere ụmụ akwụkwọ si . Anyị professors na-elekọta ma ọ bụ lekọtara adian na .
Enyi na Enyi ikuku: anyị professors na-enye aka na anyị na ụmụ akwụkwọ ndị enyi na enyi; anyị niile na-ezi ndị enyi.
Freedom: anyị na ụmụ akwụkwọ họrọ isiokwu ha na-amasị; anyị ga-imeghari ka gị ọdịmma. Anyị na-emesapụ aka ka ịga, ụbọchị ma ọ bụ ule, wdg
Tourism: Mexico bụ a-akpali nnọọ mmasị na osisi na ala, ọgaranya akụkọ ihe mere eme, omenala, na ọdịdị. Bịanụ hụ ihe dị iche iche si n'ụlọ gị na ebe!
Ebighị Ebi okpomọkụ: Ke n'etiti oyi frosts na North, ị ga-enweta anyanwụ na ọbụ aka ya. Mgbe oyi na-atụ na fọrọ nke nta mgbe oke ọkụ.
Mkpa karịa ihe mere? Bịa na-ahụ maka onwe gị.
Publications na mkpa nzukọ ma ọ bụ magazin.
International research mụ na top mahadum.
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ, na-abanye a PhD program, na anyị ma ọ bụ na ndị ọzọ na-eduga mahadum.
Strong n'akwụkwọ ndekọ na top magazin.
Akara ugo mmụta na ndị ọzọ na mba na mba enọ.
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ, inweta aha National nchọpụta nke Mexico ma ọ bụ Ẹkot na obodo gị.
Strong mmasị, onwe-akpali, nnwere onwe na mmụta na-eme nnyocha.
Research mmasị kpọmkwem Natural Language nhazi ma ọ bụ metụtara ebe, dị ka nnyocha isiokwu ị na-atụ aro.
Zuru oke mbo rụchaa omume: otu ugboro kwetara, ị ga-rụchaa ihe omume na-enweta n'ókè.
Programming ma ọ bụ scripting nkà (ngwa larịị) na-chọrọ, ọ bụrụ na nke PhD nwere ike waived, na njikere ịmụta a mmemme asụsụ dị otú ahụ dị ka Python.
Maruuru isi kọmputa sayensị, dị ka data akụkụ, algọridim, mmemme asụsụ; ezi ihe ọmụma nke mmemme usoro bụ a nnukwu gbakwunyere.
Ezi ihe ọmụma nke English: ịgụ na ide na nkà mmụta sayensị na-oru domain.
Njikere-ebipụta na nkà mmụta sayensị akwụkwọ na n'elu magazin. Njikere iji nweta dere ma n'akwụkwọ omenala. N'ihi na PhD, akwụkwọ na isi JCR-indexed magazin a chọrọ maka akwụkwọ.
Njikere òkè n'ihe omume nke ụlọ nyocha, dị ka nzukọ nke nzukọ, na n'ozuzu njikere inyere bụ a gbakwunyere.
Njikere ịmụta Spanish bụ a gbakwunyere: ọ ga-ukwuu ndụ gị dị mfe ebe a. Ịmara Spanish n'ọdịnihu bụ chọrọ.
Ndidi: itinye mba omume nwere ike ịchọ bukwanu na-ede n'akwụkwọ, gụnyere gbaara nsụgharị, wdg
Emechara gara aga ogo ezi scores: n'ihi na nna ukwu nke, okokụre BSc ukwuu; maka PhD, okokụre Master ogo (ezie na ike na-aga ime nwere ike na-kwetara na BSc ogo).
Kwenyesiri ike na. Gịnị bụ nzọụkwụ ọzọ?
Kpọtụrụ a prọfesọ bụ onye ị na-ahọrọ nwere dị ka-enye Ndụmọdụ: Alexander Gelbukh, Grigori Sidorov, Ildar Batyrshin, ma ọ bụ Hiram Calvo (họrọ naanị otu onye; imekotaotuugbo nnyefe ga-ajụ). Biko na-agụnye:
CV na gị zuru ezu n'akwụkwọ ndekọ (ma ọ bụrụ na ọ bụla) na nkà (ma ọ bụrụ na ọ bụla), ihe ndị ọzọ dị mkpa data. Attaching gara aga ogo nke akwụkwọ na akara transcripts ga-bara uru.
Gịnị mere na ị chọrọ na-arụ ọrụ na mpaghara nke NLP? Gịnị ka ị maara banyere ya, ma ọ bụ ihe gị ahụmahụ yiri isiokwu bụ?
Gịnị kpọmkwem ka ị chọrọ ịmụ na CIC? Gịnị ka ị na-atụ anya na site na ya?
Gịnị bụ gị atụmatụ mgbe ị gụchara? Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-etinye maka Master si, ị na-eme atụmatụ na-anọgide na-PhD?
Lee anya na anyị enọ page; ga-aha gị na-enwu na ya n'elu gụchara? Olee otú ị ga-enyere anyị aka inwekwu melite òkè nke anyị na ụmụ akwụkwọ na-ukpono na enọ?
Topic: ka unu nwere ọ bụla kpọmkwem echiche gị akwụkwọ nyocha? Ọ bụrụ otú ahụ, biko na-enye anyị ụfọdụ nkọwa. A iche iche akwụkwọ na a nnyocha amaghị bụ a gbakwunyere, karịsịa maka PhD.
Ọ bụrụ na anyị na-egosi na anyị na-atụle gị a siri ike nwa akwukwo, biko na-eso nzọụkwụ depụtara m nkọwa nke anyị mbanye usoro (ugbu a na m dere ya ukwuu n'ime maka PhD larịị; ajụ anyị maka ntuziaka maka MSc). Biko chere free ka kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na na obi abụọ.
Ajụjụ: Alexander Gelbukh.